The Irrawaddy's Blog: ဦးအောင်ကြည် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မနေ့က တွေ့ဆုံမှု
ဦးအောင်ကြည် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မနေ့က တွေ့ဆုံမှု
ဒီနေ့ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြပုံ။
ဘစ်ကက် said... :
နအဖ သတင်းစာမှာ အသုံးအနှုန်းဖော်ပြတာမှာ ဦးအောင်ကြည်ကိုတော့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလို့ ရေးထားပြီး ဒေါ်စုကိုတော့ ဘာရာထူးမှ မဖော်ပြတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ရှေ့လျောက်အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံမှုများမှာ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ ကိုယ်စားပြု ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ပါးစပ်ကနေပြော၊ စတိတ်မန့်တွေ ထုတ်ပြီး အန်အယ်ဒီကို တရားဝင်ပါတယ် လုပ်နေလို့မပြီးဘူး။ အစောပိုင်းက နအဖအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်ကိုတောင် ဒေါ်စုကြည်လို့ သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ဖို့ ကြိုးစားတာကို အမှတ်ရပြီး ပြတ်သားသင့်တဲ့နေရာပြတ်သား ပျော့ပြောင်းသင့်တဲ့အခါ ပြော့ပျောင်းပါလို့ အကြံပြုချင်တယ်။
နှစ်တွေ လဲ အတော်ကြာ နေ ပါ ဘီ ၊ တိုင်းပြည် လဲ ဖွတ်ဖွတ် ကြေ နေ ပါ ဘီ။ ကမ္ဘာ မှာ
If someone said there is new hope after this meeting, It will be misleading news ..They've met 10th times, still try to meet again in future. this is just the ridiculous lies from the illegal government.
တခါစားရင် မသိလို့တဲ့ နှစ်ခါစားရင်မှားလို့တဲ့ သုံးခါစားရင်မိုက်လို့တဲ့ အခုတော့ ၁၀ ခါရှိသွားပြီ ဒါဆိုကြိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ မိမိ လမ်းစဉ်အောင်မြင်ဖို့အတွက် ပြည်သူတွေကိုစတေးရတာလဲများပါပြီ
လမ်းတွေပေါ်မှာ ချောင်းမက မြစ်လိုစီးနေတဲ့ ပြည်သူ့သွေးတွေ ပေါ်ကနေ သွေးမြေမကျရေးလမ်းစဉ်
IRRAWADDY ကလုပ်စားနေကြသော လူလည်ကြီးများ ခံဗျာ..မဖော်ပြချင်လဲနေပါ မိမိ "ဖွလိုသော" စာသားလေးတွေပဲရွေးပြီးဖေါ်ပြတော့ အထင်လွဲစရာတွေဖြစ်လာပြီပေါ့ ပြည်သူ့အသံကြားချင်ပါတယ်ဆိုတာ......